မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ကော်မရှင်မှ အစီရင်ခံစာထုတ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
«ြ​မန်မာ​စ⁠စ်ေ​ခါ​င်းေ​ဆာ​င် ၃ေ​ယာ​က် စစ်ရာ​ဇ​ဝတ်မှုကျူး​လွန်တယ်လို့ြေ​ပာြ​ပီ
Myanmar/Burma: Religious Freedom and Related Human Rights Violations are Hindering Broader Reforms »
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ကော်မရှင်မှ အစီရင်ခံစာထုတ်
နိုဝင်ဘာ ၇ ၊ ၂၀၁၄ M-Media
– အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမား မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် ရှိနေချိန်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ကော်မရှင် USCIRF က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်ကို ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
“ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများက ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးကို ကြီးမားစွာနှောက်ယှက်နေ” (Burma: Religious Freedome and Related Human Rights Violations are hindering Broader Reform) ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လအတွင်းက ကော်မရှင်နာ အမ် ဇူဟ်ဒီ၊ အဲရစ် ပီ ရှက်ဝါ့ဇ်နှင့် အခြားနှစ်ဦးတို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြုလုပ် ခဲ့သည့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုမှ တွေ့ရှိခဲ့သော အချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ လာရောက်လေ့လာမှုတွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် စော်ကားတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အမုန်းတရားများကြောင့် မွတ်စလင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သည်းမခံနိုင်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူနည်းစု ဘာသာရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်သည့် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ရှိနေသော လူမျိုးကြီးဝါဒ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု အမြစ်တွယ်နေသော ဥပဒေများ၊ ပေါ်လစီများနှင့် အဆိုပြုထားသော ဥပဒေမူကြမ်း၊ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားမှု၊ မွတ်စလင်များ၏အသိအမှတ်ပြုရေး စာရွက်စာတမ်းများ အာမခံချက်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာစေသော ကျင့်သုံးမှုများ စသည့် ကိစ္စရပ်မျာအား အထူးအလေးထား လေ့လာ ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ယခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရသော ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးအပ်မှုကို ခွင့်ပြုရန်နှင့် ၎င်းတို့အား လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ပေးရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပြီး အခြားမည်သည့်တိုင်းပြည်ကမှ မဟုတ်သည်ကို သိရှိနေသည့် ရိုဟင်ဂျာများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ် ခွင့်အား ငြင်းပယ်၍မရသည်ကို သေချာစေရန် အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားသော “ရခိုင်စီမံချက်” (Rakhine State Action Plan) ကို ပြင်ဆင်ရန် စသည့်ကိစ္စများအတွက် အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအား ဖိအားပေးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘာသာရေးလူနည်းစုများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများ ရရှိရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရအား ဖိအားပေးရန်၊ သည်းခံမှုနှင့် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် တိုက်တွန်း အားပေးရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီထွက်လာတော့မည့် ကုလသမဂ္ဂ ဥပဒေမူကြမ်းအပါအ၀င် နိုင်ငံအတွင်း ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ မြှင့်တင်ရေး နိုင်ငံတကာမှ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက်လည်း အမေရိကန်အစိုးရအား အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် တိုက်တွန်းထားသည်။
လူမျိုးအမည်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ခြင်းမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက “ရိုဟင်ဂျာ” ဟူသော အသုံးအနှုန်းကိုသာလျှင် သုံးနှုန်ရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာတွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်သည်။
USCIRF ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မှုမှာ နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အက်ဥပဒေအောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ “စိုးရိမ်ရသည့် နိုင်ငံ” (CPC) အဖြစ် ထင်ရှားစေခြင်း လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကမ်းကုန်အောင် ချိုးဖောက်မှုကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ခုလက်ရှိတွင်လည်း ဆက်လက်ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရမှာ မြန်မာနိုင်ငံအား စိုးရိမ်ရသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်ကြာ သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန်အတွက် အမေရိကန်အစိုးအနေဖြင့် CPC အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းကို အသုံးချရန် အကြံပြုချက်များကိုလည်း USCIRF ၏ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
ref_ United States Commission on International
၁) USCIRF ၏ Website တွင် ဖော်ပြထားသော ဇူလိုင်လ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့မှ မွတ်စလင်မ် သုသာန်အား မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုဓါတ်ပုံ
၂)USCIRF ၏ ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး သြဂုတ်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်
အစီအရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်
M-Media Website တွင် ဖတ်ရန် =>http://www.m-mediagroup.com/news/33936
This entry was posted on November 8, 2014 at 1:00 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.